တန်ဆောင်မုန်း..သူ ~ White Angel
1:02 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 24 comments
ဟုဆိုထားသော တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်၊ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ကျီးမနိုးပွဲများကို ရိုးရာအစဉ်အလာမပျက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို ဘုရားမပွင့်မီအခါက ဂြိုဟ်နက္ခတာရာများကို အဆိုးရသော
နတ်ဘုရားများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကြတ္တိကာပွဲဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
“တန်ဆောင်”ဆိုသည်မှာ မီးရှူးမီးတိုင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၍ “ပုန်း”မှာ မီးပန်းများထွန်းလင်းတောက်ပစေခြင်း
ဖြစ်၍ “မီးရှူးမီးတိုင်တို့ကို တောက်ပစေသောလ”ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
လောကနီတိဆရာက “သရဒံ ဥတုကာလနံ ပဓာနံ”(လ တကာတို့တွင် တန်ဆောင်မုန်းလသည် အမြတ်ဆုံးလဖြစ်သည်)ဟု ရေးစပ်ခဲ့ဖူးသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလသည် ဆီးနှင်း၊ မြူ၊ တိမ်၊ သူရိန်၊ မီးခိုးဟူသော ညစ်မျိုး(၅)ပါး ကင်းစင်၍ရာသီဥတုသည် အလွန်အေးမြကြည်လင်သော လပင်ဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်တိုင်ညသည် ဆေးပေါင်းခသောညဖြစ်သည်ဟု ယူဆပြီး မယ်ဇလီဖူးများကို သုတ်၍စားသည့်ဓလေ့မှာ ယ္ခုအချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ခဝဲပန်းများပွင့်လန်းသော တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ (၁)လအတွင်း မိမိကထိန်ခင်းလိုသော ရက်ကိုရွေးချယ်၍ မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် အလှူပေး၍ ကထိန်ပွဲများကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်။
“အလှူမှာ ကထိန်၊ ဆွမ်းမှာ ပိဏ်၊ ရတနာမှာ စိန်၊ကျောင်းမှာ သိမ်” ဟူသော စကားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိထားကြမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ကထိန်သင်္ကန်းကိုကပ်လှူသော သူတို့သည် “အနှောင်အဖွဲ့မှကင်းလွတ်ခြင်း”ဟူသောအကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်လိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်း သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့မှစ၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တလအတွင်းမိမိကထိန်ခင်းလိုသော ရက်ကိုရွေးချယ်၍ မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ဆွမ်း၊ ထမင်း၊ ဟင်းများကိုချက်ပြုတ်၍ ရဟန်းသံဃာတော်များအား အာရုံဆွမ်း ကပ်လှူလေ့ရှိသည်။
အဲဒီအလှူဒါယိကာများထဲတွင် ကျမ၏မေမေလည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မေမေပြောပြချက်အရ ကျမတို့ကိုးကွယ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အလှူလုပ်ရန် ညဘက် ဆွမ်း၊ ထမင်း၊ ဟင်းများချက်နေစဉ် ကျမကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရသည့် မေမေမှာ ဗိုက်နာလာသဖြင့် ဆေးရုံသို့ပြေးခဲ့ရပြီး နောက်တနေ့(တနင်္ဂနွေ)နေ့နံနက် အာရုံတက်အချိန်တွင် ကျမကိုချောမောစွာ မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
လောကကြီးထဲကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ဖေဖေဦးစိန်မောင်၊ မေမေ ဒေါ်အုန်းကြည်တို့၏ တဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်သည့်ကျမအတွက် ဖေဖေကိုယ်တိုင် နာမည်ရွေးပေးခဲ့ပုံမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား ဖြစ်သည့်အတွက် “အ” “ဥ”အက္ခရာများကို ဦးစားပေး၍ စဉ်းစားခဲ့ရာဝယ် ရာဇဝင်ဇာတ်တော်များထဲမှ တနင်္ဂနွေအမည်ဖြင့်စသော မင်းသမီးတပါး၏ အမည်ဖြစ်သည့် “ဥမ္မာဒန္တီ” အမည်၏ ရှေ့နာမည်“ဥမ္မာ” နှင့် ဖေဖေ့အမည် “စိန်မောင်” ကိုပေါင်းစပ်ကာ “ဥမ္မာစိန်မောင်” ဟု အမည် ကင်ပွန်းတပ်ပေးခဲ့သည့်နေ့က “ယနေ့က စလို့သမီးလေး“ဥမ္မာစိန်မောင်”ဟာ “ဥမ္မာဒန္တီ” မင်းသမီးကဲ့သို့အဆင်းလှခြင်း၊ အချင်းလှခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာထက်မျက်ထူးချွန်ခြင်း၊ “လူမြင်လျှင် ချစ်ခင်ပါစေ...အသံကြား သနားပါစေ” ဟူသော ဆုနဲ့ပြည့်စုံပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးသော၊ ဘာသာတရားကိုမမေ့သော သမီးလေးဖြစ်ပါစေ...လို့ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့က ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်”..ဆိုသည့်မိဘ(၂)ပါး၏ ကျမအပေါ်ထားရှိခဲ့သည့်ဆုတောင်းမေတ္တာကြောင့် ကျမဖြတ်သန်းလာခဲ့သော ဘဝတွင် အတိုက်အခိုက်များရှိပါသော်လည်း လူချစ်လူခင်ပေါများခြင်း၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများစွာကို သင်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိခြင်း၊ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝခြင်း၊ အနာရောဂါကင်းရှင်းခြင်း၊ ရောက်ရာအရပ်တွင် ကူညီမည့်သူများနှင့် တွေ့ခြင်း၊ စသည့် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
မြင့်မြတ်လှသည့်တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျမကိုဖွားမြင်ပေးခဲ့သော မေမေ၊
အတိတ်နမိတ်ကောက်၍ နေ့သင့်နံသင့် လှပသော အမည်လေးနှင့်တကွ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ဘဝတသက်စာပေးခဲ့သာ ဖေဖေတို့အား ကျမ၏မွေးနေ့သို့ရောက်တိုင်း ရဟန်းသံဃာတော်များအား ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပြီး ကျမပြုခဲ့သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကို မိဘ(၂)ပါးအား အမျှပေးဝေပါသည်။ ရောက်ရာအရပ်မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ။ ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုပါလျှင် “နောင်ဖြစ်လေရာ လူ့ဘဝများ ရှိခဲ့ပါလျှင် ဖေဖေ မေမေတို့ရဲ့ သမီးသာ ဖြစ်ပါရစေ..”.။
စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း စားဖွယ်သောက်ဖွယ် အစုံအလင်နှင့်တည်ခင်းဧည့်ခံရင်း နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်(စနေ)နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကို ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲကြပါစို့။
Tom colins cocktail
Russian flag short drink
Black background short drink
နတ်သမီးနဲ့ အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်း MAYA ရဲ့မွေးနေ့ တရက်ထဲမို့..ကိတ်မုန့်အတူတူခွဲကြမယ်
Sea food salad(Prawns Cocktail)
Chicken with black been
Chicken and mix seafood soup
နတ်သမီးရဲ့မွေးနေ့ကို ရောက်လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားရင်း ရရှိထားသော လက်ဆောင်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။မအားလပ်တဲ့ကြားက နတ်သမီးအတွက် ဓာတ်ပုံများ၊ အက်ဆေးများ၊ ကဗျာများ ပေးပို့ကြသော သူငယ်ချင်းများနှင့် Facebook မှာ ဆုတောင်းပေးကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ E mail နှင့် မွေးနေ့ဆုတောင်းများ ပေးပို့ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှပ်သမီးရေ... မွေးနေ့လက်ဆောင်ပုံပါ.. ကျုပ်က Vandar Thee ကိုဆွဲခိုင်းတယ်။ သူက သူ့ကောင်မလေး ပန်းချီဆရာမကို ပြန်ဆွဲခိုင်းတော့ ခုမှရတာ..း)))(ဦးလေးသာဝ ရဲ့လက်ဆောင်)
Noble Moe ရဲ့လက်ဆောင်
အလွမ်းကမ္ဘာလေးနဲ့ ဝေးပါစေ..လို့ 
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါ၏..။
တစ်ရက် ၊ တစ်လ ၊ တစ်ခဏ သာမဟုတ်တဲ့
တစ်သက် တစ်ဘ၀ ထာဝရခင်မင်မှုများစွာဖြင့်
နာမည်ကတော့ မပြင်ဝူးနော် အတေခံလိုက်မယ် တတ်ချင်တတ်ပလိုက်...:p
မွေးနေ့ဆိုတာ ဘဝသစ်တစ်ခု အစပြုလို့ မွေးဖွားခြင်းပါ။မင်္ဂလာတစ်ပါးရယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ နေ့ရက်လေးပေါ့။ ဘဝကို လူသားတိုင်း တပ်မက် မက်မောကြတယ် နှစ်သက်ကြတယ် မြတ်နိုးကြတယ် ခင်တွယ်ကြတယ်။ ကျမ အပါဝင် လူသားများဟာ ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ ဒုက္ခကို သိမြင်နိုင်မှု စွမ်းအားနည်းနေတဲ့ အတွက်လည်း အခုလို ခုံမင် မက်မောနေခြင်းပါ။ အမှန်တကယ်တော့ ကျမတို့ လူသားအားလုံးဟာ မွေးဖွားလာသည့် အချိန်မှ အစပြုလို့ စက္ကန့် မလပ် မိနစ်တိုင်း နာရီတိုင်း ဇရာနဲ့မရဏဆီကို ဦးတည်ပြီး လျှောက်လှမ်း နေကြတာပါလား ဆိုတဲ့အသိကို သတိ မမူ မိကြသလို ဥပေက္ခာ ပြုနေကြတယ်။
တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘဝကြီးထဲကို မွေးဖွားခြင်းဖြင့် လူသားအဖြစ် ရောက်လာကြတဲ့ ကျမတို့တစ်တွေ သာသနာနှစ် ၅၀၀၀ ရှိတဲ့အထဲက လက်ကျန် နှစ်၂၅၀၀အတွင်း တစ်နည်းဆိုရရင် ဘုရားဟူသော လူသားတို့ကို အလင်းရောင်ဆောင်ပေးတဲ့ နေဝန်းကြီး ပေါ်ပေါက်ချိန်အတွင်း လူဖြစ်ကြရတာ ထူးကဲတဲ့ ကုသိုလ်တစ်မျိုးပါ။ လမ်းပျောက်နေတဲ့ ပုထုဇဉ် လူသားများအတွက် မီးမောင်းထိုးထားတဲ့လမ်းကို တွေ့အောင်ရှာပြီး လျှောက်လှမ်းဘို့ အခွင့်အရေး တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေစုန်မျောကာ တစ်ပါးသူကို အားကိုးပြီး ရှာလို့မရပဲ ကိုယ်တိုင်ရှာမှ တွေ့မည့် လမ်းပါ။ သာသနာတော်အတွင်း အကြောင်းနဲ့အကျိုးကို လူသားတို့ အသိဥာဏ်ဆောင်ရင်း နားလည်ခွင့် ရရှိခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အကျိုး ကောင်းတဲ့ကံများ ရရှိစေဘို့ ဘုရားသာသနာတော် အတွင်း မွေးဖွားခွင့်ရရှိ
ခဲ့တဲ့ သူများအားလုံး ယခုဘဝအတွက် မိမိရဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံး မခံဘို့ရာ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာ အရင်းခံလို့ မေတ္တာနဲ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
ဟိုး ....အနောက်မြောက် ယွန်းယွန်းက
မနက်ဖြန်-စနေမှာ ကျရောက်မယ့် မွေးနေ့အတွက် ကြိုတင်ဆုမွန်ချွေခဲ့ပါတယ် ညီမလေးရေ..။19.11.2011 မွေးနေ့ရက်မှသည် ကျန်းမာချမ်းသာစွာ စာတွေရေးနိုင်ပါစေ..။
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေလို့...။ (မမြသွေးနီ)
2011-Nov-19 ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော “မ”
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
နတ်တွေအမျိုးပေါင်းများစွာ .. ၃၇ မင်း နတ်မင်းကြီးများ ၊ နတ်မင်းကလေးများ ၊ မြန်မာနတ် ၊ အင်္ဂလိပ်နတ် ၊ တရုပ်နတ်၊ ဘင်္ဂါလီိ နတ် ၊ မျက်နှာ ရောင်စုံနဲ့ နတ်ပေါင်းစုံ ၊ နတ်ဝတ် တန်ဆာ အစုံအလင် နဲ့ နတ် ၊ Nuts ခေါ် နတ် မျိုးစုံ ၊ အချစ်နတ် ၊ မျှား ပစ်တဲ့ နတ် ၊ အိမ် စောင့် တောစောင့် သစ်ပင်စောင့် နတ် .... အဲဒီ နတ် မျိုး စုံ တွေ အထဲမှာ မှ ထူးထူး ခြားခြား နတ်သမီးလေး တစ်နတ် ..အဲ..တစ်ပါး ။ မွေးဖွားလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ .. ဘယ်နှစ် နှစ်မှန်း သေချာ မသိ လို့?? နှစ် ပြည့် မြောက် တဲ့ ရက်ကလေး ရောက်လာပြန်ပါပြီ ။
အဲ ဒီ နတ်သမီးလေးက အဲဒီနေ့ရောက်ခါနီးတိုင်း ဟိုလူ့အပူကပ် ဒီလူ့ အပူကပ် ပြီး ၊လူ အတော်များများ မေ့ လျှော့နေတတ်ကြတဲ့ နတ်မွေးနေ့ အတွက် နတ်သဘင်ပွဲကို ဆင်နွှဲ တတ်လေ့ရှိကြတဲ့ အတိုင်း ၊ ဆုတောင်း သဝဏ်လွှာလေး ပို့ ပေးပါ မဲ့ အကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ပေးတတ်တာမို့မသိချင်ယောင်ဆောင်နေချင်လို့ လည်း မရ ၊ အတော် ဂွတီးဂွကျ နဲ့ ပဲ မရေးတတ်တဲ့ ဆုတောင်းခန်းလေးကို ရေးပေးလိုက်ရပါတော့တယ် ။
“ မပြုစားနဲ”့ ဆိုပြီး “ ရင်ခုန်မိသူ ” တယောက်ကို “ ကိုယ်မညာတော့ဘူး” ကွယ် ။“ မင်းလေးအနားမှာ” ၊ “ ယုံကြည်သော အချစ်” နဲ့ “ မျှော်လင့်ခြင်းတသက်တာ ” ရယ်လို့ မှတ်ပြီး “ တိတ်တိတ်လေး ချစ်သွားမှာ ” ပါ ။
ဒီတော့ “ နှုတ်ဆက်မျက်ရည် ” ဝဲပြီး နတ်သမီး အတွက် “ သီချင်းလက်ဆောင်” လေး တပုဒ် ပေးခဲ့ပါတယ် ချစ် ပိတ်သတ်ကြီးတို့ ရယ်..အိန်ဂျယ် နတ်သမီး လေးက အဖြူရောင် ဆိုတော့ “ လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ” ထဲက နတ်သားလေး တစ်ပါး နဲ့ အမြန်ဆုံး တွဲဖက်နိူင်ပါစေ ။
တရုပ်စားတော်ဆက်ကြီးထဲမှာ အီလည်လည် မဆလာ နံ့ များမှ တခါတရံ ကင်းလွတ်ဝေးပြီး ချို မြ မြ အချစ်သီးချိုချို လေးတွေ စားသုံးနိူင်ပါစေ ။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာလည်း ချစ်ပိတ်သတ်ကြီးအား ဗီဒီယို သီချင်းများစွာ များစွာ များစွာ တင်ပြပြီး နှိပ်စက်..အဲ ... လှတပတလေးများအား မျှဝေခံစားခြင်း ပြု နိူင်ပါစေ လို့ ....ရာသက်ပန် ခင်မင်စွာ..
မကိ .. ( နှင်းဆီ၊ စပါယ်၊ ခရေ၊ ပိတောက် ပန်းပေါင်းစုံ တို့ရဲ့ အရှင်သခင်....း)))
(အံမလေးးး မောထှာ ...သူ့ ရှိရှိသမျှ ဗီဒီယိုMV သီချင်းတွေ ပြန်လိုက်ရှာ ကြည့်ရသေးတယ် ပြုစားလွန်းတဲ့ နတ်သမီးရယ်....)
ခါတော်မှီ အအေးဓာတ်တွေ၊ တသက်သက်နဲ့ရစ်ပတ်တုန်း
အိပ်စက်ဖို့ အရွက်တွေသိမ်းတဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင်သစ်ပင်တွေ
စိမ်းရာက ဝါ၊ ဝါရာက နီ၊
မြေမဟီပေါ် ကဗ္ဗလာခင်း ရဲရဲတောက်နေတဲ့အဆင်းတွေနဲ့
သိမ်းထားရတဲ့ကဗျာတွေ တောင်ပုံ၊ယာပုံ စုပြုံလို့။။
နင်းကြမ်းလိုအသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ (သူမရဲ့) နှလုံးသားခင်းလမ်းတွေအကြောင်း
လေပြေနွဲ့ရုံနဲ့တင် ဒီမျက်ဝန်းတွေ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ချင်နေခဲ့ပြီပဲ
ကဗျာကအခါခါသတ်တာ ခံခဲ့ရတယ် (ဒါပေမယ့်ကွယ်..)
PS: အမတော် နမ်းမဝ(အဖြူရောင်နတ်သမီး)ရဲ့ ၁၁၃၂၂ ရက်ခရီးထိ ဖြတ်သန်းပြီးခဲ့မှုအတွက် ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုရင်း ဖွဲ့ဆိုပါသည်။။ လက်ဆောင်ကဗျာမှာ အမတော် ကျေနပ်နိုင်ပါစေ။။။
“ အဘိုးအိုရေးတဲ့ ဗီးနပ်(စ်)အတွက်တေး ”
ဒီတစ်ရက်ရဲ့ အေးစက်စက် ည မှာတော့ ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဖန်ဆင်းပစ်မယ် ။
ဧ၀ခွင့်မပြုရင် ကျွန်တော်ခွင့်ပြုမယ် ။
ဧဒင်ရဲ့ ဘယ်နားမှာထားထားပေါ့ ...
“ ဘယ်ဆေးနဲ့ ရေးမှာလဲ ” လို့ . . .
သူကော၊ ဧ၀ကော လက်ခံလိမ့်မယ် ။
ဦးညွတ်လို့ ကြိုဆိုကြလိမ့်မယ် ။
သူငယ်ချင်းအတွက် လက်ဆောင်ပေးမယ် ။
အောင်မြင်စွာ လှမ်းနိုင်ပါစေကြောင်း . . . . .
လွမ်းဖွဲ့ ရာသီတွေ မသက်မှတ်ပါပဲ
ဆိုက်ပရက်စ်က တခါတခါ အရိုင်းဆန်မယ်
အခမ်းနားဆုံး စကားတွေနဲ့ ရေးဖွဲ့လိုက်ပါ
အဖြူရောင် အလင်းတန်းနဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါး ရှိနေတုန်းပါပဲ ...။
မီးခဲ မရှိလဲ မာနနဲ့ တောက်လောင်လိုက်ပါ
အတိတ်ဆိုတာ ခရီးသွားဟန်လွှဲ တခုမို့
အဲဒီ နိုဝင်ဘာ ၁၉ နံနက်မှာ
ဆိုက်ပရက်စ်က အလှဆန်လာလိမ့်မယ် ...။
Happy Birthday..... မွေးနေ့မှစနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ သက်ရာကျော်ရှည်ပြီး
ကောင်းကင်ယံမှ လက်ခံရရှိလိုက်တဲ့ စာပေလွှာလို
အဖြေဟာ “ အချစ် “ ပါ…….
“နတ်သမီးအတွက် ဆုတောင်း”ဆယ့်တစ်ခုမြောက်လ ဧကနဝမနေ့ရဲ့ နတ်သမီးဟာထိစပ်သမျှလောကကိုအလှဆင်မယ့်သူ့လက်အစုံကို ဖွင့်ချလိုက်တယ်။
ဒဏ္ဍာရီလာတဲ့ နတ်သမီးသိမှတ်သမျှ သုတတွေနဲ့နှလုံးသားအာဟာရ ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုရဲ့ နတ်သမီးကြည်စင်တင့်တယ် ချိုမြစွာနဲ့သူ့နှုတ်ခမ်းမှာ အပြုံးတွေ ပွင့်အာလိုက်တယ်။
အိုနတ်သမီး…. သင့်ခန္ဓာဇီဝတို့ ရှိနေသမျှ နသောကာ… ၊ အဘယာ….ဖြစ်ပါစေသတည်း။ချမ်းသာခြင်းတို့ ရှိပါစေသတည်း။တည်ကြည်မှုဖြင့် ငြိမ်းအေးပါစေသတည်း။
မမနတ်သမီးမွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရ။ခင်တဲ့ မေသိမ့်(မေသိမ့်သိမ့်ကျော်)
- အဖြူရောင်ရဲ့ အဖြူရောင်စွတ်ကြောင်း -
မနက်တစ်ခုကို သိမ်းပိုက်သွားပြန်ပီ ။
ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ နံနက်ခင်းတစ်ခုလုံးလဲ
ဘ နှင့် ဝ ကိုရေးတတ်ဖို့
အခုဆိုရင် ( - -) နှစ်တောင် ။
ကြည့်စမ်း . . .
ခံစားမှုရဲ့ ဘေးထွက်အကိုင်းအခတ်တွေ ၊
မိုးဇက်ကို ကြိုက်သလိုပြော။ ။
ဒီနေ့ နမ်းမ၀ရဲ့ .......နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်လည်းပေးချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံကလည်းမရှိ အဲလေ ရှိလည်း ၀ယ်ပေးလို့မှမရတာနော့။ ဒီတော့ မွေးနေ့မှာ မိဘတွေ ကို သတိရကြတဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နမ်းမ၀ တစ်ယောက်လည်း မွေး မိခင် နဲ့ ဖခင်တွေကို သတိရနေမှာ ပဲဆိုပြီး ကိုယ်စားဝင်ပြီး ခံစားကြည့်ပြီး မတောက်တခေါက်အရေးသားလေးနဲ့ ကဗျာလို့ဆိုလို့ ရမလားမသိနိုင်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ရေးပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ နတ်သမီးရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ထပ်တူမကျနိုင်တာကို သိနေတဲ့အတွက် နတ်သမီးတစ်ယောက် နာလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း...............
" အ " နိစ္စသဘော
မိနှင့်ဘ ကို ( မိခင်နှင့် ဖခင်) ပြုရပါလို၏ အရှင်ဘုရား.......................။ ။
“ နှင်း ” ရဲ့ နေခြည်ဟာ
အရာရာဟာ . . . ငြိမ်သက်အေးချမ်းနေခဲ့
ကောင်းကင်ဟာ ရနံ့ပါးပါးကို သယ်ပိုးလို့
ခရမ်းပြာဂီတဟာ . . ခပ်တိုးတိုး
သူတို့. . . .ဟာ တစုံတရာကို စောင့်မျှော်နေကြဆဲ
ဖျက်ကနဲပဲ . . .နာရီလက်တံဟာ
အဖြူရောင် . . အ ဖြူေ ရာင် အ လ င်းပွ င့်တွေ . . .
၀င်းကနဲ့ . . . လက်ကနဲ
ကြယ်တွေ တဖျတ် ဖျတ် . . . .
ပျံသန်းနေကြဆဲ . . . .
ဟော . . သင်တို့ကြားရဲ့လား
သူမဟာ . . ဒဏ္ဍာရီ ကကြိုးကိုဆင်မြန်းလို့
ယိမ်းဖွာ လွင့်ပျံနေကြဆဲ . . .
အို . . .နတ်သမီး
လှိုင်းတွေဟာ ကြမ်းသထက် “ ကြမ်း ”
ဘ၀တွေဟာ မှန်းသထက် “ ပမ်း ”
အမှောင်တွေကို “ လင်း ” စေမတဲ့
“ မျှော်လင့်ချက် ” တွေနဲ့ကျော်ဖြတ်ခဲ့
ဒီလိုနဲ့ . . . ဒီလိုနဲ့
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစာမက ကျော်ဖြတ်ခဲ့
အို . . .နတ်သမီး
ဟိုးအဝေးက . . .ခပ်သဲ့သဲ့.. . .ပွဲတော်သံတွေ
လမင်းဟာ မြုပ်တခါ ပေါ်တလှည့်
ဘ၀ရဲ့ မှတ်ကျောက်တွေသာ ဖြစ်တယ်
ေ နာင်မြေ က မ္ဘာရဲ့  နှ စ်ပေါ င်းများ စွာတို င်အောင်
ယခုချိန်ထိ ရောက်မလာသေးသော လက်ဆောင်များကို Comment ထဲမှာ ထည့်ပေးသွားဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်အခြေအနေကြောင့် ပို့စ်တွင်ထည့်ရန်ကျန်ခဲ့သော လက်ဆောင်ရှင်များကို အနူးအညွတ်တောင်းပါပါတယ်ရှင်..။
Posted in: အဖြူရောင်နတ်သမီးမွေးနေ့(၂၀၁၁)
best wishes for everyday ***
ံHappy birthday သူငယ်ချင်းချောချောလေးရေ... May all your wishes come true :)))
နေ့ခင်းကတစ်ခေါက် မွေးနေ့ပွဲစပြီလားလို့ ရောက်ခဲ့ပျါေကြာင်း ၊ခုမွေးနေ့ ပွဲကိုဝင်ရောက်စားောက်ပြီး နတ်သမီးတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ရာကျော်ရှည်လျက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ..ခင်မင်လေးစားလျှက်
မွေးနေ့ ပြန်တင်လိုက်ပီနော မမနတ်သမီး အာလူးဘူးသီးကလည်း ဘာမှမပြောဘူး ..တော်သေးတယ် ကွက်တိပြန်တင်လို့ ရသေးလို့ ..အပီအပြင် အလန်းဇယားတွေရေးထားတယ်နော်..လူကြီး..လာဖတ်ကြည့်ပေတော့
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး
Happy Birthday နတ်သမီး !!!
blog နဲ့ဝေးရာကို ရောက်နေပေမယ့် နတ်သမီးရဲ့ မွေးနေ့ဆိုလို့ ရောက်လာပါတယ်။ နတ်သမီးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ဘာမှပြန်မလုပ်ပေးနိင်ပေမယ့် ဘဝတစ်လျှောက် ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ စေကြောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေကြောင်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
ဟက်ပီဘတ်ဒေး ... နမ်းမဝတဲ့ နတ်သမီးရေ
အလိုဗျာ...မွေးနေ့ရှိတာ ကြိုကြိုတင်တင်လည်း မသိရပါကလား...စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ကော့တေးတွေ အကုန်မော့ပြီးပြန်သွားတယ်...အမူးပြေမှပဲ လက်ဆောင်လာပို့မယ်...
ဟိုတစ်နှစ်က နတ်သမီးမွေးနေ့ကနေ အစားအသောက်တစ်မျိုး ရသွားတယ်လေ.. ဟိဟိ
အသိပညာ တိုးတက်ပြီး စီးပွားဥစ္စာ ဒီရေပမာ ဆထက်ပွားလို့ များပြားပါစေ... လို့..
နတ်သမီးလေး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ။
ချစ်သူခင်သူတွေလဲ ဒီထက်မက ပေါများပါစေ။
ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
--*--Happy Birthday white angel--*--
ဒီနှစ်တော့ အလုပ်တွေများလို့ ကဗျာမရေးပေးနိုင်တော့ဘူး၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေ။
Happy Happy Birthday, beautiful sis white angle!! May all of your wonderful birthdays bring you happiness, health and wealth.
HAPPY BIRTHDAY ပါ မရေ..
ဒီနှစ်တော့ အလုပ်တွေ များနေတာမို့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးနဲ့ ပဲ လက်ဆောင်ပေးပါရစေ..
၁၉ နိုဝင်ဘာမှာ ကျရောက်သော မွေးနေ့ မှသည် နောင်လာမယ့် နှစ်များတွင် ဘ၀ကို မေတ္တာတံတားခင်း အားမာန်အပြည့်နှင့် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီသို့ ချီတက်နိုင်ပါစေနော်...
happy BD နတ်သမီးလေး
Happy belated Birthday ပါ ချစ်စရာကောင်းသော အစ်မ (အဖြူရောင် နတ်သမီးလေး) ရေ..။ အန်တီတင့် ပို့စ်ကိုဖတ်မိမှ အစ်မရဲ့မွေးနေ့မှန်းသိရလို့ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတာခွင့်လွှတ်ပါနော်...း)
ပျော်ရွှင်၊ ကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာပါစေ မ..ရေ..။
မွေးနေ့ပွဲနောက်ကျမှရောက်လာပြီး ကြွင်းကျန်သည်များ လှန်လှောစားသွားပါသည်။
မွေးနေ့ပွဲကိုနောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါအမရေ .
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအသက်ထက်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်ပြီး အဖြုရောင်နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့ အဓိပါယ်အတိုင်း ရာသက်ပန် ပြီးပြည့်စုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါစေ.
မွေးနေ့မှာ လူတစ်ယောက်ကို ထပ်ထပ်မွေးတယ်လို့အစ်ကိုယုံပါတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်သစ်၊လူသစ်နတ်သမီးတစ်ပါး ဒီထက်ကောင်းတာတွေနဲ့အတူ မွေးဖွားနိုင်ပါစေ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေညီမငယ်။